Bijouterie maka afọ ọhụrụ 2017
Ememe Afọ Ọhụrụ dị nso. Ma ugbu a, ọ bụ oge iji lekọta ihe mara mma nke mara mma maka abalị kpakpando. Dị ka ị maara, akara nke New Year 2017 ga-abụ onye na-acha ọbara ọbara n'ike mmụọ nsọ. N'ihi ya, oge na-abịanụ na-ekwe nkwa ịbụ ọgaranya, ihe ịga nke ọma, nchekwa ego, ma na-egbuke egbuke. Ọ bụ kpọmkwem àgwà ndị a ka a ga-ahụ maka ịmepụta ụta. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọtụtụ ndị inyom nke ejiji achọpụtala ụdị uwe. Otú ọ dị, ọ dịkwa mkpa ilekọta ihe mgbakwunye nke ọma. Dị ka ndị stylists si kwuo, mkpebi ejiji maka Afọ Ọhụrụ 2017 a na-ewere dị ka ọla mma magburu onwe ya.
Ekike ejiji maka Afọ Ọhụrụ nke Red Rooster 2017
N'inye ihe ngosi nke oge na-abịanụ, a na-emekarị ka afọ New Year jewelry 2017 na-anọchite anya ọkụ ọkụ. Otú ọ dị, ka ọ ghara ịdị na-ekpo ọkụ, ndị na-emepụta na-enye ngwaahịa ndị na-acha ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ, pink, amber, nakwa ọla edo na ọlaọcha. Ka anyị hụ ụdị ọla dị mkpa maka Afọ Ọhụrụ 2017:
Ihe olu olu . Nnukwu oke na cumbersomeness bụ ihe ndị dị mkpa nke ịke mgbe ị na-ahọrọ ihe ịchọ mma mara n'olu.
Brooch n'ụdị nke a n'ike mmụọ nsọ . Ịchọ mma n'ụdị ihe nnọchianya nke oge na-esote bụ n'ezie nhọrọ n'ezie. A na-etinye ngwa ngwa dị otú ahụ n'ime igbe na decolleté mpaghara.
Akara mkpuchi ya na ruby, coral, red rhinestones . E gosipụtara ụdị ngosi nke ụdị akwụkwọ ahụ na nchịkọta mmemme Krismas maka mkpịsị aka. Ndị na-ewu ewu bụ ihe dị oké ọnụ ahịa, na ihe okike, na nkume na-arụ ọrụ nke agba aja nwanyi.
Utu-bunches . Mee nlezianya na ntutu isi gị na etemeete gị, na-eme ka ntị gị dị mma na ogologo oge ị na-eme ya. A na-ewerekwa ọla ntị ndị nwere onwe ha, na ụdị zuru ezu na olu, mgbaaka, mgbanaka na-ewu ewu.
Uwe nke Ememe Cannes 2016
Ụdị uwe elu maka afọ 2013
Ụlọ akwụkwọ apịtị mara mma 2014
Uwe ejiji ndị inyom 2014
Uwe ejiji na 2014
Mgbụsị akwụkwọ ndị inyom n'oge mgbụsị akwụkwọ 2014
Art Art na ihu
Ejiji ejiji 2015
Mmiri / N'oge okpomọkụ 2014
Ọkwá Ụlọ Nzukọ
Pedicure - ejiji ejiji 2014
Oscar-2016 - ọrụ kachasị mma
Ọrịa ọrịa uche
Kedu ka ukpa si eto?
Umu Agbanwu Uhie
A loggia jikọtara ya na ime ụlọ
Ebumnobi sperm obere
Nkpu nke aka aka
Diane Kruger na Norman Ridus kwadoro asịrị banyere akwụkwọ nzuzo ha
Pilaf na mushrooms
Monica Bellucci dụrụ ọdụ ka ọ ghọọ plastik
Andorra maka ụmụaka
Cookware maka oven microwave
Ogige oche ogige
Mary Elizabeth Winstead tụbara Ewan McGregor
Nwa Bruce Lee
Salad "Oké Osimiri"